बेलायत देखी गोर्खाली सैनिकहरू उद्दारको लागी नेपाल प्रस्थान – Gulmiews
बेलायत देखी गोर्खाली सैनिकहरू उद्दारको लागी नेपाल प्रस्थान
April 28, 2015 Sanju Kauchha
No comments	निरा पि:जी:
यु.के. । यतिबेला गोर्खाली मनहरू आफ्नै नेपालमा सहयोग गर्न अतुर भएका छन् । नेपालको भुकम्पबाट प्रभावित जनताहरुको उद्दारका लागि बेलायतबाट गोरखा सैनिकको पहिलो टोली आज नेपाल प्रस्थान गरेको छ ।
क्वीन्स गोरखा इन्जिनियर्सबाट ३१ जनाको टोली आज प्रस्थान गर्ने निर्णय भएको त्यहाँ कार्यरत कर्पोरल लाल रानाले जानकारी दिनु भएको छ । गोरखा फिल्ड स्क्वाडनका कमिसन अफिसर मेजर हेनरीको नेतृत्वमा सो टोली नेपाल जान लागेको हो । सो टोली सम्भवतः आर्मीको सी १३ वा सी १७ जहाजबाट नेपाल उड्ने स्रोतले बतायो । यसअघि आइतबार बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले नेपालका लागि थप सहायता सोमबार पठाइने ट्वीट गरेका थिए ।
रानाका अनुसार इन्जिनियर्सको दोस्रो उद्दार टोली मंगलबार नेपाल प्रस्थान गर्नेछ । दोस्रो टोलीमा नेपाल जाने गोरखा सैनिकहरु अहिले फोकल्याण्डबाट बेलायत आउँदै छ । टोलीमा २५ देखि ३० जना हुने उनले बताएका छन ।
यस्तैगरी, तेस्रो टोली पनि तयार गरिएको छ । त्यसमा पनि करिब २५ देखि ३० जना हुनेछन् । “इन्जिनियर्सबाट ९० देखि १०० जना गोरखा सैनिकहरु उद्दारका लागि नेपाल जाँदैछन्” रानाले भने ।
पहिलो टोली उद्दारका लागि चाहिने सामग्रीहरु बिनै जाने र सम्भवतः दोस्रो टोली औजारहरुसहित जाने बताइएको छ । यसैगरी, जति सक्दो छिटै गोरखा सैनिक भित्रैको फस्ट बटालियन र सेकेण्ड बटालियनबाट पनि गोरखा सैनिकहरु उद्दारका लागि नेपाल जाने भएको छ । हाम्रो नेपाली दाजु भाईहरू बेलायत सैनिकमा सामेल भै कयौ देशहरूमा गई उद्दार गरिसकेका छन । यसपाली आफ्नै देशमा सहयोग गर्न पाउदा दिलो ज्यान दिएर काम गरि नेपाली रोएको मनहरूमा मलम लगाऊने काम अवश्य गर्नु हुने छ भन्दै हामी विविएन वर्ल्ड डट. टिभीको तर्फ देखी सलाम छ । समाचार स्रोत: बिबिन वर्ल्ड दत टि.भी Facebook	Twitter	Google+	Pinterest	Linkedin